Akụkọ - Ejiji anaghị akwụsị n'agbanyeghị oge
A na-atụ anya na ngwá ụlọ dị n'èzí ga-agbaji ala ọhụrụ. Akuko ohuru nke nyocha nke ahia ahia n'èzí maka 2021-2031 (ya na 2021-2031 dika oge amuma na 2020 dika afo isi) na-egosi na ahia arịa ụlọ n'èzí abaralarị ihe karịrị ijeri $ 17 site na 2020, yana cagR nke 6% karịa oge ndekọ aha enyere na akụkọ ahụ. Ihe ewu ewu nke ngwá ụlọ dị n'èzí azụmahịa na nchụso ndị ahịa na-achụ ngwá ụlọ n'èzí bụ isi ihe na-eduga uto nke ahịa ngwá ụlọ dị n'èzí zuru ụwa ọnụ.
Ụjọ nke ọrịa na-efe efe ekpuchiwo obodo nta zuru ụwa ọnụ. Ndị mmadụ nọ n'ụlọ na-atụ anya ịnụ ụtọ "nnwere onwe ọhụrụ" ma zuru ike n'otu oge ahụ. N'okpuru omume dị otú ahụ, a na-atụ anya na ahịa ngwá ụlọ dị n'èzí zuru ụwa ọnụ ga-agbaji ala ọhụrụ. N'oge mbụ, ọtụtụ ezinụlọ na-eji arịa ụlọ n'ime ime naanị n'èzí, mana ọ nwere ike kpakọba ọnụ ọgụgụ afọ a kapịrị ọnụ site na ogologo oge anwụ na mmiri ozuzo. Ụbọchị ndị a, ụlọ nwere mbara èzí ma ọ bụ azụmahịa na-emeghe apụghịzi ịbụ na-enweghị ngwá ụlọ dị n'èzí. Agbakwunyere site na ngwá ụlọ dị n'èzí kwesịrị ekwesị nwekwara ike ịkwalite nkasi obi nke ebe obibi ndị mmadụ ọbụna obere mbara ihu . Tụkwasị na nke ahụ, a na-atụ anya na mmemme mmekọrịta dịka nri abalị ezinụlọ na agbamakwụkwọ ga-abịaghachi ka ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ na-ebelata, na-eduga n'ịchọ ngwaahịa ngwá ụlọ n'èzí.
N'oge na-adịbeghị anya, ọrụ ndị na-azụ ahịa na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbasawanye, njem abụrụla "ihe kachasị mkpa" na ndụ ọzọ. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe ntụrụndụ na ogige ndị mepere emepe na-eji nwayọọ nwayọọ na-alaghachi n'ìgwè mmadụ, omume na-egosi ọganihu siri ike na ahịa ngwá ụlọ dị n'èzí. Ngwongwo n'èzí kwesịrị inwe ụfọdụ ntachi obi, mgbape mgbape, ụmụ ahụhụ na-eguzogide "ule nke okike", nke a bụ echiche mbụ nke ndị na-azụ ahịa mgbe ịzụrụ. Taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụgharị nyocha ha na mmepe ha gaa na enyi na enyi gburugburu ebe obibi, otu ngwá ụlọ na-agba mbọ ịchọta nguzozi n'etiti ime ka egwu nhọrọ dị mfe na iwere ụzọ na-adigide.
Na mgbakwunye, ebe ntụrụndụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ na ntụrụndụ metụtara ọrịa ahụ mechiri, dị njikere ugbu a ịlụ ọgụ maka ntụgharị mara mma, Ya mere, ọchịchọ maka ngwá ụlọ dị n'èzí amụbawo. Ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ọrụ ndị mepere emepe ka ekwesịrị ka emegharịa ka ha kwekọọ mkpa nke ikewapụ ọha mmadụ n'oge ọrịa na-efe efe gasịrị. Nke a ga-akwalitekwa ahịa nke ngwá ụlọ n'èzí nke ukwuu.
Ngwaahịa arịa ụlọ ọhụrụ na-ewu ewu n'etiti ndị na-azụ ahịa na mpaghara Eshia-Pacific. Ọ bụghị naanị na ndị na-azụ ahịa n'onwe ya nwere ike ịtụfu ego na-abawanye yana nlebara anya na ndọtị nke oghere dị n'èzí ụlọ, nakwa n'ihi usoro mmepe obodo na-abawanye na mpaghara Eshia-Pacific. .
Achọ maka ngwá ụlọ dị n'èzí na-arị elu na Singapore, India, Malaysia na mba ndị ọzọ na-eme nke ọma na njem nlegharị anya. A na-atụ anya na ahịa ngwá ụlọ zuru ụwa ọnụ ga-agafe $31 ijeri site na 2031 ma na-eto na cagR nke 6% karịa okirikiri (2021-2031). .
Oge nzipu: Ọgọst-25-2021